ह्याप्पी ! असार १५ [Pictures]
Aakar June 29, 2010
आज असार १५, नेपालीहरु का लागि एउटा पर्व सरह नै हुन्छ । आज दही च्युरा खाने दिन ! सम्भवत: आज कै दिनलाई धान दिवस को रुपमा पनि मनाउने गरिन्छ । तर यसपाली अहिले सम्म पनि वर्षा नलागेकोले, अधिकांश ले धान भने रोप्न पाएका छैनन्, अत: उनीहरुलाई असार १५ पनि खल्लो, खल्लो नै लागेको छ । सिचाइ को सुविधा नहुनु नै, हामी नेपालीहरु को दुर्भाग्य होला ।
घर मा हुँदा आज दिन मा कम्ति मा पनि, खेत मा गएर एकचोटि हिलो छोइन्थ्यो । हिलो मा चल्नु पनि रमाइलो नै हुन्छ, अझ असार को झरी परिरहेको बखत पानी मा भिज्दै, हिलो मा खेल्दै, बाउसे गर्न निकै नै रमाइलो हुन्थ्यो ।
भनिन्थ्यो, आज को दिन त राजा रानी ले पनि हिलो छुन्छन् रे, अत: उनीहरुले पनि हिलो खेल्छन् भन्ने थाहा पाएर आफूलाई पनि, कसैगरि पनि हिलो खेल्नुपर्थ्यो आज को दिन मा ! तर अहिले परिस्थिति फरक छ ! :P
आज यही असार १५ को मेसो पारेर, २-३ दिन अघि आफ्नो विश्वविद्यालय को वरिपरि खिचेको फोटो पोष्ट गर्दैछु । आशा छ, यी हरिया देखिएका धान खेतहरुले, यहाँहरुलाई पनि, असार १५, रोपाइ, दही च्युरा को सम्झना दिलाउने छ । असार १५ का अवसर मा समस्त नेपाली कृषकहरुलाई हार्दिक शुभकामना !
Anonymous June 29, 2010 at 4:10 PM
Your post and the pictures made me to miss the Asar 15alot :(..............
Dhaan ropnu, paanima rujhnu, khetalaharusang ko tyo khaja khanu, hilo jyaper khelnu, hilyamai bhaye pachi pokhari ma paudanu, tyo dahi-chyura, aaNp ko mithas aadi aadi...
I'm feeling nostalgic..... reminded me my childhood :(
Only the thing I did today is - ate dahi-chyura. :D. Have you too?
Anyway, Happy Asar Pandhra. :)
Bibek June 29, 2010 at 7:55 PM
Same To You....... :-)
Sweta June 29, 2010 at 10:18 PM
The pictures are so lovely....and I enjoyed it personally as being there in the field and touching the muddy field...running there and feeling nature within...Just loved the pictures..it gaveafreshness or saying in Nepali.....Sheetalta.... :)
NKM August 1, 2012 at 11:32 AM
Happy dhau-baji day!